Fihaonana teo amin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny Antenimieram-pirenena. - Ministère des Affaires Etrangères
Fihaonana teo amin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny Antenimieram-pirenena.
Tatitra nataon’Andriamatoa TEHINDRAZANARIVELO Djacoba A.S. Liva, Minisitry ny Raharaham-bahiny, teo anatrehan’ny Antenimieram-pirenena. Talata 02 Jona 2020, CCI Ivato.
Nisongadina nandritra ny tatitra nataon’Atoa Tehindrazanarivelo Djacoba Liva, Minisitry ny Raharaham-bahiny androany teo anatrehan’ireo mpikambana ao amin’ny Antenimieram-pirenena ny momba ny fitakiana ireo Nosy Malagasy manodidina Glorieuses, Juan de Nova, Europa ary Bassas da India.
Taorian’ny filazana ampahibemaso fa mikasa hanangana tahirin-javaboahary ao amin’ny Nosy Glorieuses i Frantsa, dia notsiahiviny fa nampiantso ny Masoivoho frantsay izy mba hanehoany mivantana ny fanoherana tanteraka izany fikasana izany avy amin’ny Fanjakana malagasy. Azo atao koa ny manamafy indray izany fitsipahana izany amin’ny fihaonana faharoa izay tokony hataon’ny roa tonta, raha toa ka tsy mbola hajanon’i Frantsa izany fikasana izany araka ny fangatahan’i Madagasikara. Mbola miandry ny fisokafan’ny fifandraisana an’habakabaka indray moa ny roa tonta vao afaka miroso amin’izany fihaonana faharoa izany.
Nohamafisin’Andriamatoa Minisitra koa fa ny famerenana ireo Nosy malagasy ireo ho eo amin’ny fiandrianan’i Madagasikara no vaha-olana voalohany aroson’ny Delegasiona Malagasy eo amin’ny fifampiraharahana amin’ny Delegasiona frantsay, mba ho fampiharana ny lalàna iraisam-pirenena momba ny fanafoanana ny fanjanaha-tany sy araka ny faneken’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana tamin’ny taona 1979. Rehefa milamina io vao afaka midinika loha-hevitra hafa ny roa tonta, toy ny fiaraha-miasa eo amin’ireo Nosy ireo.
Notsiahivin’Andriamatoa Minisitry ny Raharaham-bahiny ihany koa fa mbola maro ireo mpiray tanindrazana tsy afa-mody noho ny fikatonan’ny sidina an’habakabaka ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana izay mihatra eto amin’ny firenena. Miisa 1254 ireo izay nampahafantatra ny momba azy amin’ireo Masoivoho malagasy, ka ao ireo mpizaha tany, ao ireo izay nanatanteraka fiofanana sy ireo mpianatra, ary ireo izay namita iraka tany ivelany. Miisa 703 koa ireo tantsambo malagasy nangataka ny hody an-tanindrazana noho ny fahataperan’ny fifanarahana arak’asany, ka misy ao Afrika, any Amerika, any Eoropa, Azia, ary Oseania. Ao ihany koa ireo vehivavy malagasy niasa tany Koweit miisa roan-jato latsaka kely izay noraisin’ny fanjakana koweitiana an-tànana mandra-podiany aty Madagasikara.
Manaraka akaiky ny momba azy rehetra ireo ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny, amin’ny fomba rehetra izay eo am-pelatanany.
Notsindrina manokana fa rehefa tonga ny fampodiana ireo Malagasy ireo, indrindra ireo tena sahirana ara-piainana noho ny tsy fahafahany mody an-tanindrazana, dia hatao fitiliana izy ireo alohan’ny hialàny amin’ny toerana misy azy ary hapetraka amin’ny toerana fihibohana mandritra ny tapa-bolana. Noho izany dia mila fiomanana aram-pampitaovana izany fampodiana izany, toy ny toerana fihiboana hasiana azy ireo, ny fepetra sy kojakoja ara-pahasalamana isan-karazany, sns.
Ao anatin’ny fotoan-tsarotra toy izao dia maro ihany koa ireo Diaspora Malagasy, na Malagasy am-pielezana, izay nifandrimbona ka nanao tsipaipaika ahazoana mandray an-tànana ireo mpiray tanindrazana tavela any ivelany ireo ka tratran’ny fahasiranana lalina. Ankasitrahana feno ny fandraisana andraikitra toy izany satria mariky ny firaisam-pon’ny Malagasy eo anatrehan’ny ady iombonana.
Nohazavain’Andriamatoa Minisitra teo anatrehan’ny Antenimieram-pirenena ihany koa ny fandraisana anjara mavitrika izay ataon’ny Minisitera ao anatin’izao ady amin’ny valan’aretina Coronavirus izao, eo amin’ny fikarohana sy fikarakarana fiaraha-miasa amin’ireo firenena namana sy fikambanana iraisam-pirenena samihafa. Izany no atao dia mba ahazoana manatevina ny fitaovana enti-miady amin’izany aretina izany eto amin’ny firenena, toy ny fanafody sy kojakoja ara-pahasalamana isan-karazany. Notanisain’Andriamatoa Ministra tao ireo fanampiana voarain’i Madagasikara noho izany fifampiraharahana izany, anisan’izany ireo roa farany ho azo ny harivan’ny 2 Jona sy amin’ny 3 Jona.
Ao anatin’ny ezaka ara-diplomatika sy ara-pahasalamana izay tarihan’Andriamatoa Andry RAJOELINA, Filohan’ny Repoblika, dia nomarihana manokana ny famokarana ny CovidOrganics, ilay Tambavy CVO entina miaro sy miady amin’ny Coronavirus izay nametraka an’i Madagasikara ho isan’ny loha-laharana amin’izany ady izany eto anivon’i Afrika sy izao tontolo izao. Nanomezana ireo firenena afrikana maro izay nangataka izany koa ilay Tambavy CVO ka nahazoan’i firenena malagasy fankasitrahana manokana avy amin’ny Filohan’ireo firenena ireo, izay nidera ny fihetsika am-pirahalahiana nataon’Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny fahaiza-manaon’ireo mpikaroka ara-tsiantifika malagasy.